Ziyini izici nendlela yokuziphatha? - Mytika Speak
Ikhaya / Abalingiswa Nezici / Ziyini izici nendlela yokuziphatha?
Izici ziyimpawu yakho yobuhle. Yizingxenye zakho ezihlukile, ezibonwa abanye ngokuthinta kokwenza kwakho umuzwa, isimilo, noma izimfanelo zomzimba. Imikhuba ayinakile futhi ivame ukuzuzwa njengefa. Isibonelo, uma unendodakazi ezithulela yona, leyo mikhuba ingakukhumbuza ugogo wakho naye owayezihlekisa.
Imikhuba emihle ihambisana nokwakhiwa komlingiswa wakho futhi iyalingisa. Uma ubona umuntu ofuna ukufana naye, ungahle ukhethe ukukhetha ukulingisa ezinye zezenzo nokuziphatha kwabo. Isibonelo, izingane zivame ukuthwebula imikhuba yazo eminingi kubanakekeli bazo.
Ngokungafani nezici, indlela yokuziphatha ingahle iguqulwe ngesinqumo esaziwayo.
Ukungaqondi kahle amazwi ami
Bafunda ukuthinta kwami
Imikhuba yami, izwi elithulile lomphefumulo wami
Ukukhathazeka ngaphakathi, izandla zami ziyagodola
Ukumamatheka kwami ​​okunokuthula namehlo akhathazekile
Ngifihla uvalo engilubambe ngaphakathi
Bethuke kakhulu bebona isibazi engisigcinayo
Leso sibazi yisici sami
Amathegiukuqonda ukukhula komuntu siqu izinkondlo ingokomoya izici